Tag: dzoka pakuisa mari | Martech Zone
Tag: dzoka pakuisa mari
Vhiki rino, mutengi watiri kubvunza naye anga achibvunza kuti nei zvirimo zvavange vachishanda zvakaoma kudaro zvisingaite kunge zviri kuita mutsauko. Uyu mutengi haana kushanda kuti avandudze avo vanoteerera pasocial media, panzvimbo pekushandisa kwakawanda kwekuedza kwavo mukutengesa kunze. Isu takavapa iwo mufananidzo wehukuru hwevateereri vavo mune vezvenhau zvichienzaniswa nevavanokwikwidza navo - uyezve ndokuzopa maitiro azvo
Isu takagovana infographics pane izvo zvinokurudzira kushambadzira, shanduko yekushambadzira kushambadzira zvisati zvaitika, pamwe nezvinyorwa chaizvo zveanokurudzira kushambadzira maitiro akanakisa, mashandisiro ekushandisa vanokurudzira, uye musiyano uripo pakati pesimba revanhu vane mukurumbira. Iyi infographic tsananguro yekutarisisa kwekushambadzira kwekushambadzira uye marongero azvino uno uye manhamba pane masvikiro nemikana. Ivo vanhu veSmallBizGenius vaisa pamwechete yakazara infographic iyo inopa yakajeka mamiriro ekushambadzira kushambadzira nhasi, Under
Sevashambadziri uye mapuratifomu enhau ekukura, isu tiri kuwana zvakawanda zvakawanda pamusoro pekumusoro nekudzikira kwekudyara munhau dzezvemagariro. Uchaona kuti ini ndinogara ndichitsoropodza tarisiro yakatarwa nevanoona vezvenhau - asi hazvireve kuti ndiri kutsoropodza vezvenhau. Ini ndinochengetedza matani enguva uye kushanda nekugovana huchenjeri nevezera rako uye nekukurukura nemhando pamhepo. Handina mubvunzo kuti nguva yangu yandakapedza pasocial media ine
Zvemagariro venhau vaive nevimbiso inoshamisa senge svikiro rekusimudzira hukama pakati pemutengi kana mutengi uye bhizinesi rinopa zvigadzirwa kana sevhisi Makambani mazhinji akasvetuka pakarepo mubhodhi asi iyo ROI yanga isinganzwisisike sezvo zvaisawanzo guma nekukurumidza kana kunanga mari. Usati waisa yako yemagariro chirongwa kuti ubudirire, zvakakosha kuti unzwisise izvo zviitiko zviri zvechokwadi kutyaira ROI munharaunda. Zviri zvemukati zvekushambadzira, zvemagariro
NeChishanu, Gumiguru 27, 2017 Mugovera, Kukadzi 13, 2021 Douglas Karr
Iwe unogona kunge uchangobva kuverenga ruzivo rwevatengi vangu neWaze paTwitter pandakataura bug. Ini ndanga ndisinganyanyo kufadzwa nemhinduro. Zvakanaka, handisini ndega sezvo vatengi uye vatengi vari kutendeukira kune vezvenhau uye vachitarisira kugadzirisa nyaya dzevatengi. Vamwe vevatengi vangu havana kana mumwe akafara pandakavaudza kuti kutsoropodza kwevatengi kupindura kwakange kuri pasocial media, asi inzvimbo yeruzhinji